मध्यपहाडी लोकमार्ग दैनिक सात घण्टा अवरुद्ध Bizshala -
मध्यपहाडी लोकमार्ग दैनिक सात घण्टा अवरुद्ध
कुश्मा । नेपालको मध्य भागबाट पूर्वपश्चिम जोड्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको मध्यपहाडी लोकमार्ग दैनिक सात घण्टा बन्द हुने गरेको छ ।
अहिलेसम्म १५ प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाको पर्वतको प्रवेशद्वारदेखि मालढुङ्गासम्मको २३ दशमलव ७६९ किलोमिटर स्तरोन्नतिको काम लामा कन्ट्रक्सन प्रालिले जिम्मा लिएको छ । कम्पनीले रु ८३ करोड ९८ लाखमा पर्वत खण्ड स्तरोन्नतिको कामको ठेक्का पाएको हो ।
राजकुमार पराजुली सरकारद्वारा जारी दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन...
काठमाण्डौ । नयाँ संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकका सातवटै प्रदेशमा...
-रमेश लम्साल काम गर्ने निकायको सार्थक प्रयास भयो र निर्माण...
ट्राफिक नियम मिचेर घर फर्किनुभयो ? जुनसुकै बेला प्रहरीको फोन
-नारायण ढुङ्गाना “हेल्लो ! राजकुमार जी, बोल्नुभयो ?” एक प्रहरीको...
अधिकतम तापक्रम वृद्धि भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा यो वर्षकै बढी...
चलिरहेको केबलकार एक्कासी बन्द भो, प्रधानमन्त्री ओलीसहित ४०
काठमाण्डौ । फ्रान्सको भ्रमणमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली...
गाडीभाडा बढाउने र रात्रिकालीन बस सेवा थाल्ने निर्णय
काठमाण्डौ । जनस्तरबाट सरकारको तीव्र आलोचना हुन थालेपछि विदेश...
अबदेखि ट्याक्सीहरुले मिटरमा हिँड्न नमाने रुट निलम्बन !
काठमाण्डौ । मिटर जडान गरेर पनि मिटरमा कुदाउन नमान्ने ट्याक्सीको...